ဆောင်းပါးနှင့်အာဘော် | Myanmar Muslims' Voice (MMV)
Category Archives: ဆောင်းပါးနှင့်အာဘော်
European Parliament condemns practices against Muslim minority in Myanmar July 8, 2016 ENGLISH, Featured Posts, ဆောင်းပါးနှင့်အာဘော်, ပြည်တွင်းသတင်း European Parliament condemns recent crimes and widespread discrimination against albinos in Malawi, ongoing restrictions of fundamental democratic rights in Bahrain and practices that discriminate against Myanmar’s Muslim minority, in particular the Rohingya, in three resolutions voted on Thursday. Whilst welcoming the peaceful transfer of power to Myanmar’s first non-military president since 1962 after
Read More ASEAN MPs: Myanmar government must take action in response to anti-Muslim violence July 4, 2016 ENGLISH, ဆောင်းပါးနှင့်အာဘော်, နိုင်ငံရေးသတင်း JAKARTA,4July 2016 — Two recent attacks on mosques in Myanmar have again raised questions about the commitment of the Myanmar government to tackle rising anti-Muslim sentiment and the hate speech that fans it, ASEAN Parliamentarians for Human Rights (APHR) said today. . The collective of regional lawmakers called on authorities in Myanmar
Read More “ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ဆလိုင်းတင်မောင်ဦး ကျဆုံးသည့် နှစ်လေးဆယ်ပြည့်နေ့ အမှတ်တရ” June 22, 2016 Featured Posts, ဆောင်းပါးနှင့်အာဘော်, နိုင်ငံရေးသတင်း ၂၀၁၆ ခုနှစ် ဇွန်လ (၂၆) ရက်သည် မြန်မာနိုင်ငံသမိုင်းတွင် စစ်အာဏာရှင်စနစ်အားအပြတ်သားဆုံး ဆန့် ကျင်တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့သူ ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ဆလိုင်းတင်မောင်ဦး ကျဆုံးခဲ့သည့် နှစ်လေးဆယ်ပြည့်သည့်နေ့ဖြစ်သည်။ ဒီမိုကရေစီရေးသို့ အသွင်းကူးပြောင်းနေပြီ ဟူ၍ လူထုအတော်များများက ထင်မှတ်မှားနေကြချိန် ဤနှစ် ဤလအတွင်းမှာပင် စစ်အာဏာရှင်စနစ် အခိုင်အမာရှိနေသေးကြောင်း ထင်ရှားသည့် သာဓက တခုကို အမှတ်မထင် တွေ့ မြင်လိုက်ကြရသည်။ ယင်းမှာ သီပေါ စော်ဘွားစ၀်ကြာဆိုင် ၏ ကြေကွဲဘွယ် ဘ၀အတ္တုပ္ပတ္တိအား ရိုက်ကူးထားသည့် Twilight Over Burma ရုပ်ရှင်ပြခွင့်အား ငြင်းပယ်ခံလိုက်ရခြင်း ဖြစ်သည်။ ဆလိုင်းကိုတင်မောင်ဦး နှင့် စ၀်ကြာဆိုင် တို့ နှစ်ဦး၏ ဘ၀ကိုနိုင်းယှဉ်ကြည့်လျှင် တူညီသော အချက်များ အတော်များများ
Read More UN Special Rapporteur on human rights in Myanmar to undertake official country visit June 19, 2016 ENGLISH, ဆောင်းပါးနှင့်အာဘော်, ပြည်တွင်းသတင်း, နိုင်ငံရေးသတင်း The United Nations Special Rapporteur on the situation of human rights in Myanmar, Yanghee Lee, will undertake an official visit to the country from 20 June to 1st July 2016. This visit takes place atakey juncture for Myanmar withanew Government in place since April following last year’s historic elections. Read More « Older posts